लक्ष्मीको शव ल्याउन संकलित रकम हस्तान्तरण – Saurahaonline.com
लक्ष्मीको शव ल्याउन संकलित रकम हस्तान्तरण
चितवन मंसिर १३ । ईराकमा ज्यान गुमाएका २६ वर्षीय लक्ष्मी बलको शव नेपाल ल्याउन तामाङ सञ्चार समुह चितवनले संकलन गरेको सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको छ । हेटौँडामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी मृतक लक्ष्मीका दाई विनोद मोक्तान र श्रीमान असोक बललाई संकलित रकम रु १ लाख २४ हजार ३२१ हस्तान्तरण गरीएको हो । बैदेशिक रोजगारीका क्रममा मक्वानपुर कैलाश गाँउपालीका २ बैकुण्ठकी बलको ईराकको बसरा क्षेत्रमा ज्यान गएको थियो ।
आर्थीक अभावका कारण शव नेपाल ल्याउन समस्या परेको खवर पाउनसाथ तामाङ सञ्चार समुह चितवनले पहिलो पटक विस्त्रीत समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । साथै समुहले ८००५ रुपँैया जम्मा गरी समुहका सदस्य राजेस रुम्बाको संयोजकत्वमा सहयोग संकलन अभियान सुरु गरेको थियो । जसमा देश तथा विदेशमा रहेका विभिन्न संघ सस्था र व्यक्तिहरुले सहयोग गरे । सहयोगी मनहरुमा तामाङ सञ्चार समुह चितवन ८००५, समुहका सदस्य लक्ष्मण तामाङ (हाल कतार) बाट १००००, समुहका सदस्य प्रकाश तामाङ ब्लोन (हाल कतार) बाट ५०००, सरिता चाम्लिङ (हाल हङ्कङ्) बाट ५०००, पेमा संगे लामा गुरु मक्वानपु हाल चितवन ले ५००० रुपैँया सहयोग गर्नुभएको छ । यस्तै मेतोक छ्योईलिङ बौँद गुम्बा तथा छ्योमि ज्याङ छ्युप साप्ताहिक टोल मक्वानपुर डाँडाबास १००००, रोषन दोङ तामाङ (हाल कतारबाट) ५०००, सुरेश रुम्बा तामाङ कतारबाट ५०००, राष्ति नगरपालीका चितवनबाट ३०००, सुवाष अधिकारी चितवनबाट ५००, शम्भु सुनारबाट १००५, र अमेरीकामा रहनुभएका कानि शेर्पाले १०००० रुपैँया सहयोग गर्नुभएको छ । यस्तै सिमा लामा लोप्चन सार्लाहिबाट २०००, तिलक ब मोक्तान चितवन १२००, धर्म पुन ११११, सिता पुन १०००, राजेन्द्र थोकर डाँडाबास मक्वानपुरले १०००० रुपैँया सहयोग गर्नुभएको छ । यस्तै साङछेवाङ टसि बौद्ध गुम्बा फाईभ ग्रुप चितवन ९०००, थेग्छेन ग्याछ्योलिङ बौद्ध गुम्बा तामाङ गुठी डडुवा चितवनबाट १५०००, जीवन सिंह मोक्तान साउदी ५०००, सिता माया मोक्तान साईप्रस ३०००, सुरज थिङ चौवास मकवानपुर २०००, भिम ब गुरुङ साउदीबाट २०००, तारा देवि मोक्तान कुवैत २०००, सुमित्र थिङ डाँडावास मकवानपुर १०००, फुर्बा दोर्जे लामा मकवानपुर बैकुण्ठ १०००, गोमान सिं रुम्बा लामा चौकी डाँडा चितवन १००० र टिका राम मोक्तान काँकडा मकवानपुरबाट ५०० गरी एकमुष्ष्ट १ लाख २४ हजार ३२१ रुपैँया मृतक परिवारलाई हस्तान्तरण गरीएको हो ।
कार्यक्रममा मृतकका श्रीमान असोकले सञ्चार समुहको सहयोगलाई कहिल्यै भुल्न नसक्ने भन्दै सहयोग गर्ने सवै व्यक्ति तथा सस्थाप्रति आभार आभार व्यक्त गनुभयो । यस्तै केहि दिन अघि मात्रै जापानबाट सरोज मोक्तानको पहलमा १ लाख ३८ हजार रुपँैया तथा गाउँमा संकलन गरेको १६००० रुपैँया पनि प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै मक्वानपुर कैलास गाउपालीकाबाट ५१००० दिने आश्वासन दिएको छ भने उता इजरायलमा पनि सहयोग संकलन भएको बताईएको छ । गाँउमा पनि स्वईच्छिक रुपमा सहयोग संकलन भएको कैलाश गाउपालीका २ का वडा अध्यक्ष राजेन्द्र घिसिङ तामाङले जनाकारी दिनुभयो । शव नेपाल ल्याउन करिव ४ लाख लाग्ने बताईएको छ । मृतक लक्ष्मीका ५ वर्षीय छोरी छिन । उनि अहिले काठमाडौमा एल केजीमा पढ्दै छिन । यसअघिबाटै विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको तामाङ सञ्चार समुह चितवनले अहिले केहि फरक तथा समाज सेवाका विभिन्न कार्यक्रममा जोड दिएको समुहका अध्यक्ष उर्गेन तामाङले बताउनुभयो । कार्यक्रममा मक्वानपुरका संचारकर्मिको पनि सहभागीता रहेको थियो । अवैध यात्रा (राहदानी न ०८६९४१६) वाहक लक्ष्मी सिन्धुपाल्चोकका एक एजेण्ट विले सेर्पा मार्फत २ वर्ष पहिले ईराकको बसरा क्षेत्रमा पुगेकी थिईन । ईराकमा नेपाली कामदार जान प्रतिबन्ध भए पनि भारतको बाटो हूँदै अवैध रुपमा ईराक पुगेकी हुन । लक्ष्मीको मृत्युको खवर ईस्तामावादस्थित नेपाली राजदुतावासबाट कन्सुलर सेवा विभाग काठमाण्डौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मक्वानपुर हुँदै करिव डेढ महिना अघि परिवारसम्म पुगेको थियो । तर लक्ष्मी र परिवारविचको सम्पर्क भने करिव ६ महिना अघिबाटनै टुटेको लक्ष्मीका श्रीमान असोकले बताउनुभयो । एम्बेसीका अनुसार मृत्युको कारण अत्महत्या रहेको छ ।
लक्ष्मीका आफन्तले सव ल्याउन पहलको आग्रह गर्दै वैदेशिक रोजगार विभाग, कन्सुलर सवा विभाग देखि अनुसन्धान हुने आशामा अपराध अनुसन्धान महासाखासम्म पुगेको तर अवैध बाटोबाट गएकाले शव नेपाल ल्याउन पनि समस्या हुने जवाफ पाएपछि परिवार थप पीडित बनेका हुन । धेरै पैसा कमाउने लोभमा परि दलाली, विभिन्न एजेन्टमार्फत सरकारको आँखा छल्दै प्रतिवन्ध रहेका मुलुकमा नेपाली कामदार जाने गरेको यो पहिलो घट्ना भने होईन । तर सरकारी संयन्त्र अनि नीति नियमले पनि नरोकिएको अवैध यात्राका कारण जोखिम मात्रै बढाएको छैन, धेरै घर परिवार आँशुमा डुविरहेका छन । यसप्रति सम्बन्धीत सरोकारवाला निकाय तथा स्वयम व्यक्ति आफै सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ ।
सुपारी ‘तस्करी’लाई वैधानिक अनुमति! एमाले घरधनी अग्रवाल सेटिङको सिन्डिकेटमा को–को छन्? २०७८, १ बैशाख बुधबार
पाकिस्तानमा धार्मिक नेताको पक्राउपछि तनाव, प्रदर्शनस्थलमा इन्टरनेट बन्द २०७८, १ बैशाख बुधबार
साउदी उड्न लागेका ६७ भारतीयहरू विमानस्थलबाट फर्काइए २०७८, १ बैशाख बुधबार
वीरगन्जमा कोरोनाको बिगबिगी : नर्सिङ क्याम्पसका २२ छात्राहरु संक्रमित २०७८, १ बैशाख बुधबार
काठमाडौं: सरकार चलाइरहेको नेकपा एमालेको थापाथलीस्थित मुख्यालयका घरधनी सञ्जय अग्रवालको सेटिङका आधारमा सरकारले.....